Spotify achakurumidza kuuya kuApple Watch | Ndinobva mac
Spotify ichave iri kuuya kuApple Watch
Ani naani anotanga kurova, anorova kaviri. Izvi ndizvo zviri pachena kwatiri mushure mekuona zvese zvakaitika nechikumbiro cheApple Watch icho chokwadi chinofanira kuwanikwa kwenguva yakareba, hongu, tiri kutaura nezveSpotify. Mune ino kesi, chinguva chakapfuura, mugadziri Andrew Chang, akagadzira kunyorera kweApple Watch inonzi Spotty uye zita racho rakafanana chaizvo nechishandiso pacharo rakaita kuti vanogadzira Spotify vasvetukire paari. Mushure meizvozvo iyo app yakanzizve Snowy Asi vagadziri veSpotify vakakatyamadzwa neapp yaChang zvekuti vakafunga kushanda naye kuvhura iyo app nyowani uye isu tinogona kuzopedzisira tave neyepamutemo Spotify app paApple Watch.
Iyo Yechando Yekuvandudza inoti muchirevo:
Mhoroi vanhu vese, ndinokutendai nekushivirira uye kunzwisisa. Ndiri kufara kuzivisa kuti ini ndichave ndichishanda naSpotify kuunza Snowy kuApple Watch seyakavanzika app yeSpotify. Spotify's ine simba iOS SDK yakaita kuti zvikwanise kuvandudza Snowy, ini handigoni kumirira kutora zvinhu padanho rinotevera nehunyanzvi uye maturusi anowanikwa paSpotify. Kunyangwe ini ndisingakwanise kupa fungidziro yekuti ichave ichiwanikwa riini, iyi app yaizokurumidza kuwanikwa kuvashandisi veApple Watch.
Saka pasina kuva nezuva rakatarwa reichi chingaitwe chepamutemo cheSpotify application yeApple Watch, iri pachena ndeyekutanga kwebasa rakaitwa naChang, izvozvi chirongwa chepamutemo chechigadzirwa chemaoko chave pedyo nekuratidzwa uye zvese nekuda kwedanho rekutanga naSpotty. Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kunakidzwa nechishandiswa chepamutemo cheyakakurumbira mimhanzi inoridza mimhanzi yeApple wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Spotify ichave iri kuuya kuApple Watch
iTunes Unganidzo ichavhara kwemaawa masere musi waApril 8
Vamwe gumi nemashanu "MacBook Pro Vashandisi Vanotaura Ruzha Nyaya